ओली पक्षले बनाएका सबै कमिटी एमालेमा रुपान्तरण, कसले के जिम्मेवारी पाए ? – Nepal Press
ओली पक्षले बनाएका सबै कमिटी एमालेमा रुपान्तरण, कसले के जिम्मेवारी पाए ?
चैत ७ गतेको बैठकमा माधव नेपाललाई खबर गर्न महासचिवलाई निर्देशन
२०७७ फागुन २८ गते १६:३०
काठमाडौं । पुनःस्थापित नेकपा एमालेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक माधव नेपाल पक्षले थाहै नपाइ महत्वपूर्ण निर्णयसहित टुंगिएको छ । बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्नुका साथै नेताहरूको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा समाहित भएका रामबहादुर थापा बादललाई वागमती प्रदेशको इन्चार्ज बनाएको छ । बादलसहित २३ जना माओवादी नेता एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएका छन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन् । स्कूल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी भने ओली आफैंले लिएका छन् । अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारी भने नराख्ने जानकारी ओलीले गराएका छन् ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन २८ गते १६:३०
2 thoughts on “ओली पक्षले बनाएका सबै कमिटी एमालेमा रुपान्तरण, कसले के जिम्मेवारी पाए ?”
रमेश राई says:
त्यो गु लाई किन खबर गर्नु पर्यो?यदि बिकाश नै गर्ने हो भने गरेर देखाउ,दुनियाँ नैटङ्गकिलाई खबर गरेर हैन।
देव चम्द्र says:
ओलि बा ले अलि हतार गरेजस्तो लाग्यो।घर मा कहिले काहीं हाथालाहाल पनि हुन्छ तर गल्ती महसुस गर्ने सदस्य लाई ठुलो हुनुको नाताले यति सारो बाइपास नगरेको भय राम्रो हुन्थ्यो ।